Tahiti Tourisme oo magacowday agaasime cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Tahiti Tourisme oo magacowday agaasime cusub
Jebinta Wararka Faransiiska Polynesia • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Shirkii Golaha Maamulka ee Agaasimayaasha Dalxiiska ee Tahiti ee la qabtay Janaayo 13, 2020, waxaa la go'aamiyay in loo magacaabo Jean-Marc Mocellin inuu noqdo Madaxa Sare ee Maamulka (CEO) ee Ururka Suuq geynta (DMO) Jasiiradaha Tahiti. Magacaabistiisa waxaa soo jeediyay Maïlee Faugerat, oo ah Guddoomiyaha Guddiga Maamulka ee Tahiti Tourisme, iyo Wasiirka Dalxiiska, Nicole Bouteau.
Ka dib markii uu ka tagay agaasimihii hore, Paul Sloan bishii Oktoobar ee sanadkii hore, baaq maxali ah iyo mid caalami ah oo loogu talagalay codsiyada waxaa bilaabay Tahiti Tourisme.
Tirada badan ee araajida la soo gudbiyey, wakaaladda shaqaalaynta Michael Page ee ay kireysay DMO, ayaa horey loo soo xulay 6 codsadeyaal ka dibna waxaa wareystay Wasiirka iyo Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha Tahiti Tourisme dhammaadkii sanadkii hore.
Wareysiyadaas kadib, Mr. Jean-Marc Mocellin codsigiisii ​​waa la hayaa oo waxaa loo soo bandhigay xubnaha guddiga ee Tahiti Tourisme. Wuxuu caan ku yahay French Polynesia iyo gudaha warshadaha dalxiiska, hadana waa agaasimaha guud ee Nouvelle Calédonie Tourisme, DMO ee New Caledonia.
Wuxuu ku dhashay New-Caledonia, Jean-Marc Mocellin wuxuu ka tagay kadib markuu ka qalin jabiyay dugsiga sare si uu ugu sii wato waxbarashadiisa Hoteelka Maaraynta iyo Dalxiiska ee Nice halkaas oo uu kaga soo qalin jabiyay diblooma "BTS" Waqtiga) adoo soo bandhigaya qoraal ku saabsan "horumarka joogtada ah ee dalxiiska iyadoo la ixtiraamayo deegaanka."
Wuxuu ku raad-joogay xirfad silsilado hudheello caalami ah oo raaxo leh oo markii ugu horreysay keenay London halkaas oo toos loogu shaqaaleeyay ka dib waxbarashadiisa kooxda Sheraton Waxaa la tababaray muddo 2 sano ah, ka dibna waxaa loo diray Afrika, Benin, Nigeria, Gabon iyo Masar oo ku takhasusay furitaanka hoteelada, isagoo jaranjarada ka fuulayay hal jaranjaro ilaa kan xiga.
Kadib 6 sano oo uu ku sugnaa Afrika, wuxuu ku biiray silsiladda hoteelka ee Shangri-la taas oo, markii tababar sare loogu qaaday Penang-Malaysia, ay u dirtay Fiji muddo 4 sano ah si uu u maareeyo howlaha ugu badan ee xilligaas loo dalxiis tago xilligaas, Shangri-la's Dalxiiska Fijian (436 qol jiif / 650 shaqaale) ka dibna Maamulka Guud ee Shangri-la Mocambo ee Nadi.
Kadib wuxuu yimid Tahiti halkaas oo uu aad ugu xiiseynayay Polynesia mudadii 23 sano ahayd isagoo qaatay maamulka halyeeyga Beachcomber ee uu dayactiray, balaariyay una badalay Dalxiis Intercontinental Tahiti.
Baahida loo qabo tartan cusub iyo baaqa khibrad xirfadeed ee Aasiya ayaa ka dhigay inuu ka tago Tahiti si uu u hogaamiyo Intercontinental Hua Hin ee Thailand muddo 2 sano ah.
Dhamaadka sanadka 2016, fursada uu ku hogaamin karo Nouvelle-Calédonie Tourisme jasiiradiisa hooyo halka waaxda dalxiiska maxaliga ah ay sii fideyso, ayaa ku riixday inuu aqbalo soo jeedinta dowlada Caledonia. Wuxuu ku lug yeeshay suuq geynta halka uu ahaa agaasimaha guud ee Nouvelle-Calédonie Tourisme, halkaas oo uu ku soo saaray xirfado cusub muddadii 3 sano ahayd isla markaana uu si firfircoon uga qayb qaatay sharaxaadda horumarinta istiraatiijiyadda dalxiiska ee New Caledonia.
Jean-Marc Mocellin wuxuu iska leeyahay Polynesian-ka, waana ogyahay halka loo socdo Jasiiradaha Tahiti si fiican iyo sidoo kale suuqyada soo gala. Wuxuu jecel yahay dhaqanka Polynesia wuxuuna aad ugu nugul yahay dalxiiska waara. Sidaas awgeed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno magacaabistiisa, ayay tiri Nicole Bouteau, wasiirka dalxiiska. Aqoonta uu u leeyahay Jasiiradaha Tahiti iyo waayo aragnimadiisa Aasiya iyo gobolkaba waxay faaiido weyn u leeyihiin meesha loo socdo
Mudane Mocellin wuxuu qaban doonaa jagada bilawga Abriil. Intaas ka dib, maamulka guud ee ku meel gaarka ah ee Tahiti Tourisme waxaa hubin doona Vaima Deniel, Madaxa Sarkaalka Hawlgallada Maxalliga ah.